Puntland “Inta badan dadka ka Tahriiba degaanadeena waa Itoobiyaan” – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAPuntland “Inta badan dadka ka Tahriiba degaanadeena waa Itoobiyaan”
February 12, 2018 Falastiin Axmed WARARKA MAANTA 0
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland ayaa sheegtay sanadkii la soo dhaafay xeebaha Puntland in ay ka Tahriibeen dad tiradooda ay kor u dhaafeyso 35,000 oo qof, kuwaasi oo u badan dhalinyaro.
Dadkan ayaa waxa ay sii maraan dalka Yemen, iyaga oo u jiheysta dhanka Qaaradda Yurub, waxayna la kulmaan dhibaatooyin fara badan, oo loo geysto.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur (Jubba) oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in Puntland arrintan ay wax badan ka qaban doonto, si loo bad baadiyo nolosha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
“Dadka Tahriibayaasha ah, Puntland sanadkii hore waxaa soo galay Tahriibayaal gaaraya 1,250 qof, waxayna ka soo galeen dhanka Tukaraq, dadkan waxay ka imaanayaan Itoobiya iyo Koonfurta Soomaaliya, Boqolkiiba Sideetan dadka ka Tahriibay Puntland sanadkii tagay waxa ay yihiin Itoobiya, halka Boqolkiiba Labaatan ay yihiin Soomaali.” Ayuu yiri Agaasime (Jubba).
Xeer Ilaaliyaha Qaranka Oo Sheegay In Lala Xisaabtamayo Taliyeyaasha Saldhigyada Booliska…
Dhagayso:- Duqii Hore Ee Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed “Dalka Amaan Darro Kama Jirto Ee Hal Arin Baa Kajirta”
651,300 total views, 5,616 views today
651,300 total views, 5,616 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
651,174 total views, 5,619 views today
651,174 total views, 5,619 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
651,203 total views, 5,615 views today
651,203 total views, 5,615 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
651,264 total views, 5,618 views today
651,264 total views, 5,618 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
651,325 total views, 5,619 views today
651,325 total views, 5,619 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]